Raha ny harena misy eto Madagasikara no voatrandraka araka ny tokony ho izy: manaraka ny mangarahara sy voatantana tsara dia azo heverina angamba fa farafaharatsiny sahala amin’ny laharan’ny toe-karena misy atsy Afrika Atsimo no toerana misy antsika ao anatin’ny fotoana fohy, izay firenena Afrikanina tokana ao anatin’ny G20 (fikambanan’ny firenena 20 manankarena indrindra eto ambon’ny tany).
Fa inona moa no mampiazakazaka ny firenena matanjaka ho avy eto Madagasikara?
Tsy ny harena isan-karazany misy eto ve? Ny mampalahelo dia olom-bitsy monja sy olona hafa firenena no manjakazaka sy manankarena, ary tompoina eto Madagasikara fa ny ankoatry izay dia mifanipaka an-karona toa ny valala, ny ambik’ambiny hatsipin’ ny olona amin’ny tany no ifandroritana sy hifamonoana – izay no toe-javatra hatrizay ka hatramin’izao.
Sanatria hanenjika sy hanome tsiny be fahatany ny hafa na ny vahiny no vahaolana. Ry zareo mahalala ny ilainy fa isika koa tokony hahalala ny tadiavintsika ka mametraka ny tanjona sy rafitra matotra ary toe-tsaina mifanaraka amin’izany mba hanana fiaraha-monina mampivoatra sy miteraka fandrosoana.
Marina fa tsy ny Malagasy rehetra no latsaka ambany amin’ny resaka toe-tsaina, betsaka ny mangetaheta ny hivoatra ary manana ny finiavana ny hanova zavatra. Tsy vitsy ny Malagasy misongadina sy manana ny maha-izy azy eo amin’ny fiaraha-monina fa betsaka koa ny tsy mahalala ny lalan-kombàna.
▪ Ao ny tafavoaka soa aman-tsara tonga amin’ny tanjona iriana fa mipirina sy mangina sao voaroba na ripaky ny toe-tsaina ory hava-manana,
▪ Ao ny manangon-karena amin’ny fomba rehetra fa te ho tafavoaka mafy. Tsy olana na ara-dalàna na tsia, tsy miasa saina na hanimba ny hafa aza: “Vola ihany ry Ranona a!”
▪ Ao indray no mihevitra fa tsy ho tafavoaka intsony – tsy sahy mieritreritra akory,
▪ Ao ny tsy mahalala akory fa manan-jo ny ho tafavoaka ary tokony ho tafavoaka,
▪ Ao indray no tsy mandinika akory ka mihevitra fa fandanian’andro izany resaka izany fa ny hanina hohanina,
Marina fa efa samy vizan’ny fahantrana, matahotra sy tofoky ny fahadisom-panantenana ny rehetra. Kanefa kosa tsy maintsy isika tsirairay no mandray an-tanàna ny fiainantsika raha tsy izany dia ny hafa no hanao ny sitrapony amintsika. Manan-jo sy mendrika ny hivoatra ny Gasy fa tsy ho mpitazana sy mpitsiriritra fotsiny ny fananan’ny hafa.
Mety ho tonga ao amintsika ve ny toe-tsaina izay hanova ka hampivotra ny Gasy tsirairay? Sa inona ny “Malagasy Dream” hipetraka ho an’ny tantara: “S.M.P.L? Samy Mameno ny Paosiny dia Lasa” ve?
Cette entrée a été publiée le vendredi 20 janvier 2012 à 11:17 et taguée "Malagasy Dream", fiaraha-monina malagasy, Fihavanana, firaisankina, malagasy mandroso, Malagasy mivoatra, S.M.P.L, Tanjon'i Madagasikara, teo-tsaina sy fomba Malgasy, tondro zotra et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Politique, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy »
3 responses to “Malagasy Dream sa S.M.P.L ?”
[…] Madagasikara ? Toa efa lasa resabe sisa ity resaka fitiavan-tanindrazana ity amin’izao fa dia samy mameno ny kibony izao no politika misy […]
[…] saina sy handinika lavitra intsony ny mpiara-belona fa samy manao izay hampandroso ny fiainany. Samy mameno ny paosy dia lasa. Misy ny tsy te hanadihady firy izay mety ho loharanom-bola intsony fa rehefa mety hahazahoana vola […]
[…] manova zavatra no hitarika fiovana. Raha izao fifampitondrana eto amintsika izao no mitohy dia izay “tsara vintana” sy “be sandry” ihany no ho tafavaoka fa ny sisa kosa dia hitrongy vao homana eny ihany raha tsy maty eny […]